को हो कांग्रेस र नेविसंघ बलियो हुन नदिने ? फेरि भयो यस्तो षड्यन्त्र !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
को हो कांग्रेस र नेविसंघ बलियो हुन नदिने ? फेरि भयो यस्तो षड्यन्त्र !
काठमाडौं – पटक–पटक विवाद देखिने गरेको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा फेरि विवाद देखिएको छ ।
कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको कात्तिकमा हुने भनिएको महाधिवेशन आइतबारदेखि सुरु सार्वजनिक कार्यतालिकाका कारण अन्योलमा परेको छ । कात्तिक १६ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्न नेविसंघले ७ असोजदेखि मावि तथा क्याम्पसको अधिवेशन सुरु हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
असोज ७ मा हुने अधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिले यसअघि तोकेका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू शुक्रबारसम्म नगएपछि महाधिवेशन प्रक्रिया अन्योलमा परेको नेताहरूले बताएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
संघका महामन्त्रीद्वय कुन्दन काफ्ले र सरोज थापाले शुक्रबार साँझसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि गए–नगएबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । यद्यपि अध्यक्ष नैनसिंह महरले शनिबारदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जाने दाबी गरे । तर, महरले पूर्वनिर्धारित महाधिवेशनको कार्यक्रममा भने कुनै फरक नपर्ने बताए ।
संघले मावि तथा क्याम्पसहरूको अधिवेशनपछि असोज १२ मा महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिकाको अधिवेशनको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसपछि प्रदेशतर्फका क्षेत्रमा भने असोज १५ मा, जिल्लातर्फ असोज २१ र उपत्यकाका क्याम्पसहरूमा असोज २३ मा अधिवेशन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश समितिहरूको अधिवेशन भने कात्तिक १० र ११ मा गर्ने गरी मिति प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि कात्तिक १३ मा प्रतिनिधि टुंगो लगाउने र १४ गते दाबी विरोधका लागि समय दिइने बताइएको थियो। त्यस्तै सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो ।
केन्द्रीय महाधिवेशन भने दशैंलगत्तै कात्तिक १६ गरिने बताइएको थियो । गत भदौ २ मा पार्टीले संघको वर्तमान कार्यसमितिलाई तीन महिनाको कार्यकालको म्याद थप्दै महाधिवेशन गर्न भनेको थियो । शुक्रबारसमम केन्द्रीय तहका प्रतिनिधिहरू उपत्यकाबाहिर नगएकाले नेविसंघभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर संशय छाएको छ ।
महाधिवेशन र संगठन सुदृढीकरणमा ढिलाइ हुँदा नेविसंघले आफ्ना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । कतिपय जिल्ला समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा जिल्ला–जिल्लामा विवाद समेत रहेको छ ।